Beesha Sool Waxay Aqoonsan Tahay 18 ka Gobol Ee Soomaaliya | LAASKA NEWS AND ANALYSIS
Home > Faallo, WARARKA	> Beesha Sool Waxay Aqoonsan Tahay 18 ka Gobol Ee Soomaaliya
Waxaan rabaa in shacabka Soomaaliyeed meel ay joogaanba aysan ka war wareegin runta iyo xaqiiqda ayna xusuustaan in umadda Soomaaliyeed dawlad dhaxe ay yeelato ay ugu dambeysay dawladdii kacaanka ee rogmatay Bishii Janauary 1991.
Waxa aynnu dawlad kunahay hadda, waa xeerarkii,heshiisyadii iyo sharciyadii caalamka iyo dawladdii kacaanka ka dhaxeeyay.
Waxaad ogaataan in inta dawlad dhexe oo dadka ka dhaxeysa oo shaqadeeda ka adag oo aan ka haybaysaneyn nin kasta,maamul kasta iyo Beel Walba laga helayo – isla markaana shacabka 18 ka gobol ay usiman yihiin qaranka Soomaaliyeed aysan Beeshu u dhammayn ciddi kaqayb qaadata ama kaqayb gasha wax kasta oo maamul ah ama dawlad meel kale lagusoo dhisay ama sharciyo labadalay ama cid sheegata dhulka iyo deegaanka.
Waxaa xusid mudan in shacabka Beesha Sool ay aaminsan yihiin midnimo Soomaaliyeed ayna taageersan yihiin dawlad kasta oo Soomaali yeelato,wixii maamul oo kasoo hadhana laga wada tashado si simanna awood wadaag loo yeesho.
Ogowna Beeshu inaysan meelna kamaqnayn, xaqee iyo awoodda dalka ay ku lahaydna aysan meelna kahelin,taasina khilaaf iyo dhibaato ay beesha dhexdeeda u keentay.
Qof kasta ama siyaasi kasta oo maamul ama xukuumad ka tirsan wuxuu leeyahay taageerayaal iyo kuwo kasoo horjeeda.
Haddaba marka laga reebo kooxo ama siyaasiyiin si gaar ah isaga soo horjeeda.
“Daraawiish meel uu joogo qarankuu umaqan yahay” ee yaan laysku aakhira seegin.
Waxaad ka wada dharegsan tihiin dalka waxaa ka jira maamulo, ama maamul beeleedyo lagu dhisay hab beelood,salkana ku haya ama kasoo jeeda Jabhado.
Dalka Intaanay burburku kadhicin shacab iyo masuuliyiin kabadan jabhadaha ayaa dalka joogay kana wadanisanaa jabhadaha,haddana dalka kamaqan,saameynna ku leh,waxaa jira siyaasiyiin iyo dawlado kasii horreeyay oo iyaguna shacbiyad ku leh bulshada una baahan in talada dalka laga qayb galiyo.
Waxaa jiray khilaafaad siyaasadeed oo Soomaali oo dhan udhaxeeya iyo dhibaatooyin umadda dhex martay oo aan xal loo helin,si rasmi ahna aan loo guda galin lagana hormariyay nin walba ama koox walba siday iyagu awood ugu yeelan lahayd dalka.
Magaalo Dekad leh oo la yidhaahdo waa caasimad iyo maamul, oo loo samaystayna ciidan ,ciidankaasina uu 90% uu yahay Beel kaliya,
“laguma noqon karo Qaran”.
Reer dabooli kara hay’adihii dawladnimo oo is xukumi karaana mafilayo inuu jiro.
Waxaana muuqata in jabhadihii ay la awood noqdeen dawladdii Soomaaliyeed oo aan la’aantood aan waxba la dhaqaajin karin.
Xukuumad kastoo la doortaana oo aan lahayn ciidan qaran oo dhisan ay fashilmayso,fadeexadna ay ka qaadayso,shakina galayso dawladdas iyo wadaniyadeeda sidaasna laysku haysan doono.
Haddaba Soomaaliyay intaad runta isku sheegaysaan Soomaali jaahwareerkaa ayay ku jiraysaa, waxaana imanysa maalin gobolba gobol u go’ degmo kastana ay meel ugodo,layskuna gurman waayo,dhulkana lasoo galiyo dawladaha jaarka ah ee aan badda lahayn oo bad laga siiyo badda Soomaaliya,marin biyoodkana ay quwadaha waaweyn ay dagaan, “haddaan xal degdeg ah loo helin oo aan la joojin Federaalka iyo arrinta ah maamul goboleedyada” ,islamarkaana aan lagu soo celin habkii 18 ka gobol oo aysan hoos tagin gacanta dawladda,gaar ahaan wasaaradda Arrimaha Gudaha, ama goboleedyo maamulkooda leh, haddii taa dhici weydo waxaa imanaysa “in dad badan oo ku noolaa gobolada taageersanaana Soomaalinimada,midnimada umadda iyo dawladda Soomaaliyeed ee caasimadeedu tahay Muqdisho ay uga turjumaan maamul sanka galis ah oo aysan dadku rabin” taasina ay keento in “muqdisho dawladda ka dhisan laga soo hor jeesto”.
Muqdisho iyo Beesha gacanta ku haysa waxaan uga digaynaa inay xal kagaaraan arrinta isasoo taraysa ee ah “shacabka aan deegaan ku ahayn Muqdisho inaysan rabitaan iyo aaminaad toonna aysan u hayn Muqdisho”,waana qayb kamid ah waxyaalaha isaaminaad la’aanta iyo maamul goboleedyada keentay iyo in madaxweyne iyo PM wax lala saxiixo ,waa haddii dalku xor yahay warkaasi.
Hogaamiyayaasha Soomaaliya Oo Ku Kulmay Dubai – Xiriirka Mustaqbalkooda (laaska.wordpress.com)
Go’aanada Shirkii Addis Ababa Ee Saxiixayaasha Heshiiska Siyaasadeed Ee Xaaladda Kala Guurka Soomaaliya (English) (laaska.wordpress.com)
Shirkii Kooxda Xiriirka Caalamiga (ICG) Ee Somalia- War-murtiyeed – (Eng) (laaska.wordpress.com)
Laga Bilaabo 26 Ka Juun Wax Maamul Ah Oo Ku Dhisan Jabhad Beel Lagama Aqoonsana Deegaanka Beesha Sool Beesha Sool Waxay Aqoonsan Tahay 18 ka Gob.Jamhuuriyadda Soomaaliya,Dastuurkana Kii “Kacaanka”